Ukuba Sesichengeni Sokubanjwa eDominican Republic | Incwadi Yonyaka Ka-2015
Kwafuneka ‘Balumke Njengeenyoka Ukanti Babe Msulwa Njengamahobe’
Kwakubalulekile ukuba abakhonzi bakaYehova abathembekileyo baqhubeke befumana ukutya kokomoya ebudeni bokuvalwa komsebenzi, nangona elo yayilixesha elinzima kubo. Ngaloo minyaka, abazalwana abaninzi babebanjwa, bagwetywe baze bavalelwe ejele.
UJuanita Borges ubalisa athi: “Xa ndafumana inyaniso ngo-1953, ndandisazi kakuhle ukuba njengeNgqina likaYehova ndisesichengeni sokubanjwa. Nyhani ke ndabanjwa. NgoNovemba 1958, xa ndandiyokubona uDade Eneida Suárez, kwafika amapolisa aza asityhola ngokubamb’ iintlanganiso. Savalelwa iinyanga ezintathu kwaza kwafuneka sibhatale iipeso eziyi-100—imali yaseDominican Republic eyayilingana needola zaseMerika eziyi-100 ngelo xesha.”
Amapolisa ayenoludwe lwamagama abazalwana noodadewethu.
Urhulumente wenza konke okusemandleni ukuze aphelise iintlanganiso zamaNgqina, kodwa abazalwana abazange baphele mandla. Kodwa ke, kwakufuneka ‘balumke njengeenyoka ukanti babe msulwa njengamahobe.’ (Mat. 10:16) UAndrea Almánzar uthi: “Kwakufuneka singafiki ngaxeshanye kwiintlanganiso. Sasimane sigoduka ebusuku size sihambe ngeendlela ezingafaniyo ukuze singarhanelwa.”
UJeremías Glass, owazalwa ngexesha utata wakhe uLeón evalelwe, waba ngumvakalisi ngo-1957, eneminyaka esixhenxe. Ukhumbula iintlanganiso ezazingenela ngokufihlakeleyo kowabo nezinto ekwafuneka zenziwe ukuze kugqukwe umkhondo. UJeremías uthi: “Bonke ababekho babenikwa inombolo eyayibachazela ukuba kufuneka bahambe nini. Ekupheleni kweentlanganiso, utata wayendimisa ngasemnyango ukuze ndijonge iinombolo zabantu, ndibakhuphe ngababini baze bagoduke ngeendlela ezahlukeneyo.”
Elinye icebo lalikukuba iintlanganiso zingene ngamaxesha angazukuqapheleka. Ngokomzekelo, uMercedes García wafumana inyaniso kumalume wakhe uPablo González. Xa wayeneminyaka esixhenxe ubudala umama wakhe wasweleka ngoxa utata wakhe wayevalelwe, eshiya yena nabantwana bakowabo abasithoba bengenabani. UMercedes wabhaptizwa ngo-1959 eneminyaka esithoba. Ukuze bangakrotyelwa, intetho yobhaptizo yaba ngo-3:30 ekuseni. Le ntetho yaqhutyelwa endlwini yomzalwana, lwaza ubhaptizo lwenziwa kuMlambo iOzama onqumla kwikomkhulu lesixeko. UMercedes uthi: “Sasisele sigoduka ngo-5:30 xa kanye abahlali besavuka.”
Ulwando Phantsi Kwentshutshiso
Phezu kwayo nje intshutshiso eqatha nobuxoki obabusasazwa, inani labavakalisi laphantse laphindeka kabini ngoxa umsebenzi wawuvaliwe.